भ्रष्टाचारज्यूको खोजी ! | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो भ्रष्टाचारज्यूको खोजी !
on: April 26, 2019 तीतो मीठो
युक्रेनमा हास्य कलाकार भ्लादिमिर जेलिन्स्की राष्ट्रपति बनेछन् । उनले जीवनभरि हँसाए, सरकार चलाउन परेपछि अब पक्कै सिरियस हुन्छन् होला । तर, यता नेपालमा हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली लामो समय सिरिएस भएर राजनीति गर्नुभयो । अहिले प्रम भएपछि भने सबैलाई हँसाउने गर्नुभएको छ । अब उहाँलाई सिरिएस हुनु जरुरी पनि भएन होला । अर्को शब्दमा भन्दा, जेलिन्स्की जोकर हुँदै राजनीतिज्ञ बने । ओली राजनीतिज्ञ हुँदै जोकर बनिरहनुभएको छ । प्रायः जोक सुनाइरहनुहुन्छ । उहाँले बारम्बार सुनाइरहने एउटा जोक हो ‘भ्रष्टाचारीलाई समात्छु र निर्मूलै पार्छु’ भन्ने । त्यसो त सत्ता र शक्तिमा पुग्नेबित्तिकै प्रायः सबैले भ्रष्टाचारज्यूलाई मेटेरै छाड्छु भनेर कसम खाने गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारज्यू नेपाली परम्पराका धरोहर हुन्, कुलका गौरव हुन् । उहाँ विरुद्ध हजारौं प्रतिवेदन लेखिए, सयौं मुद्दा परे । आम्दानीभन्दा बढी आर्जन कसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि उठे । तर, उहाँ सधैं ससम्मान दोषमुक्त हुनुभयो ।
बिचरा भ्रष्टाचारज्यूले कसको के बिगार्नु भएको थियो र उहाँलाई निर्मूलै पार्नुपर्ने ? कहिले माइतीघरमा धर्ना, कहिले सिंहदरबार गेट अगाडि जुलुस प्रदर्शन र नाराबाजी । भ्रष्टाचारज्यूलाई मेट्नैपर्ने, हटाउनै पर्ने रे । किन होला ? भलै यी सबै गतिविधिले भ्रष्टाचारज्यूलाई कुनै फरक पर्नेवाला भने छैन है । उहाँले इतिहासमा भ्रष्टाचारविरोधी ठूला मान्छे धेरै नै देखिसक्नुभएको छ । भ्रष्टाचारज्यूलाई लाग्दो हो कि ‘यस्ता गफ दिने जोकरहरू कति आए, कति गए, आफूलाई केही फरक पर्नेवाला छैन, आफ्नो काम गर्दै जाऊ बाबु’ भनेर ।
हरेक भेला, गोष्ठी, छलफलमा प्रधानमन्त्रीले पनि आफू सत्तामा आएपछि भ्रष्टाचार डराएकोले ऊ देशबाट भागिसक्यो भनेर पनि ठोकुवा गर्ने गर्नुभएको छ । उहाँले देशमा कतै भ्रष्टाचार भेटिए समातेर ल्याउनू, इनाम दिन्छु समेत भन्नुभएको छ । रमाइलो कुरो चैं के छ भने प्रायः जुन सभा र गोष्ठीहरूमा प्रम पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ उहाँसँगै कुम जोडेर भ्रष्टाचारज्यू पनि मुसुमुसु हाँसेर बसिरहनु भएको हुन्छ । तर, बिचरा प्रम उहाँलाई देख्न सक्नुहुन्न । धेरै नजीकको वस्तु देख्न सकिँदैन नि त । जस्तै, आफ्नै नाकमुनिको भाग कसले पो देख्न सक्छ र ?
उहाँ अर्थात् भ्रष्टाचारज्यू देखिनुहुन्न, तर उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ । यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, उहाँ सबैतिर हुनुहुन्छ । अफिस अफिसमा, टेबल टेबलमा, फाइल फाइलमा, कलम कलममा । दूधका पोका पोकामा, मेलम्चीको पानीको फोकामा, सिंहदरबारको ढोकामा, सडकमा, विश्वविद्यालयमा, न्यायालयमा । यहाँसम्म कि राष्ट्रपति निवासदेखि ललिता निवास, चेलीबेटीका रोजीरोटीदेखि पशुपतिका भेटीसम्ममा उहाँको कमाल देख्न सुन्न पाइन्छ । पाए भ्रष्टाचारज्यूलाई भेट्न नचाहने कोही हुँदैनन् होला । तर, भेटेको कुरा कोही बताउन भने चाहँदैन । रमाइलो कुरा के छ भने हाकिमहरू आफ्नो कार्यालयमा भ्रष्टाचारज्यू छैन भनेर सगौरव घोषणा पनि गर्छन् । तर, फेरि भ्रष्टाचारज्यूलाई पक्रने कुरा पनि गर्छन् । ए बाबा ! हुँदै नभएको भए उसलाई पक्रने कुरा चैं किन गरिराको होला ?
अझ भ्रष्टाचारज्यूकी सहोदर दिदी महँगीलाई त धेरैले चिन्दा पनि चिन्दैनन् । दिदीको उत्तरोत्तर प्रगतिमा भाइ भ्रष्टाचारकै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हात रहेको हुन्छ । महँगी र भ्रष्टाचार दिदीभाइ प्रायः सँगै हिँड्ने, खाने गर्छन् । कहिले दिदी अगाडि, कहिले भाइ । प्रत्येक कदम कदममा एकअर्काको साथ र सहयोग रहेकै हुन्छ । यो क्रम कपडादेखि किताब खरीदसम्म, मेडिकल कलेजको फीदेखि तरकारी, फलफूलसम्म, वाइडबडी जहाजदेखि सेनाको बिस्कुट खरीद गर्दासम्म दिदी महँगीको भाइ भ्रष्टाचारज्यूसँग सल्लाह, सहयोग र सहभागितामा हुन्छ । सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो कि लडाकूको भत्तादेखि नक्कली भ्याट बिल, सुडान काण्डदेखि, नुन, सुन, तेल र एनसेल काण्ड लगायतका सबै श्रृंखलामा यी दिदीभाइले राम्रै नृत्य प्रदर्शन गरेका थिए ।
जान्ने बुझ्ने अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, भ्रष्टाचारज्यू र विकास पनि नजीककै दाजुभाइ पर्ने हुन् । जहाँ जहाँ विकास जान्छ, त्यहाँ त्यहाँ भ्रष्टाचारज्यू आफै पुग्नुहुन्छ । कहिले करोड पर्ने कार, जीप वा भ्यान चढेर, कहिले एस्क्याभेटर वा लोडरमा गुडेर । यति कुरा दाबीका साथ भन्न सकिन्छ कि नेपालको कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा उहाँविना कुनै काम हुनै सक्तैन । सरकारमा बसेर जनताको सेवाका लागि समर्पित कतिपय राष्ट्रसेवकहरूलाई नै हेर्नुस् न । सुरुवालको इँजारले कसिएर दाउरी परेको पेट भ्रष्टाचारज्यूको शरणमा जानेबित्तिकै दिन दुईगुना, रात चौगुनाका दरले कसरी भुँडीको विकास भइरहेको हुन्छ ? भ्रष्टाचारज्यू जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ उहाँसँग सहमत सबैको प्रगति गराईदिनुहुन्छ । त्यसैले यो पंक्तिकारको मत छ कि भ्रष्टाचारज्यू हात्ती हो भने विकास पुच्छर, भ्रष्टाचारज्यू आगो हो भने विकास धूँवा, एउटा पछिपछि अर्को, सँगसँगै ।
जो भ्रष्टाचारज्यूको तेजोवध वा विरोधमा लाग्छन्, तिनीहरूको हविगत प्रेम सञ्जेलजस्तै ठिसलाग्दो हुन्छ । विगतमा जजसले भ्रष्टाचारज्यूलाई भगाउँछु भनेर लागे, उनीहरू आफै लगौंटी कसेर भागे । कोही बन्दूक देखाएर भागे । कोही प्रतिवेदन देखाएर भागे । कोही दौरा र टोपीमा भागे । कोही धोती र गम्छासँगै भागे । कोही रूखमा चढेर भागे । कोही हँसिया हथौडा देखाएर भागे । कोही गाई र हलो देखाएर भागे । कोहीले बोतलै पिएर भागे । कोही जुस मात्र पिएर भए पनि भागे । कोही नयाँ कोट सिएर भागे । भाग्न चैं सबै सबै भागे ।
भ्रष्टाचारज्यू नेपाली परम्पराका धरोहर हुन्, कुलका गौरव हुन् । उहाँ विरुद्ध हजारौं प्रतिवेदन लेखिए, सयौं मुद्दा परे । आम्दानीभन्दा बढी आर्जन कसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि उठे । तर, उहाँ सधैं ससम्मान दोषमुक्त हुनुभयो । अन्तमा आय त सबैको बढाउनैपर्ने हुन्छ नि त । त्यसैले यो सिङ र पुच्छरै नभेटिने भ्रष्टाचारज्यूको खोजीमा समय बर्बाद गर्नुभन्दा बरू उहाँलाई एउटा सर्वशक्तिमान् दैवी शक्ति सम्झेर उहाँको प्रशस्तिमा भजन गाउन शुरू गरौं । उहाँको अनुकम्पाले यो भौतिक जीवनमा केही उन्नति भैहाल्छ कि ?
भ्रष्टाचारलाई पक्रन्छु भनेर माइक फुक्नेले नै भित्र भित्रै बाइक चढाएर फक्रन दिइरहेको हुन्छ । त्यसैले त भ्रष्टाचारज्यु कण कणमा व्याप्त हुनुहुन्छ ।
It is not the corruption that is doing the most damage in Nepal , it is rather the sheer incompetence among high level politicians and bureaucrats. If these people were highly competent and efficient as well then one could tolerate some ” licking the hand that does the honey harvest”. Vast majority of everyday corruptions are “petty” corruptions which is basically extorting the ordinary service seekers of government services, these are harder and costlier to tackle but these people are highly efficient since they do the job quickly if you bribe them. The easier ones to tackle are the big ones either in monetary value or policy corruption, which unfortunately are tied to powerful big shots and their political survival and are almost impossible to crack.
भ्रष्टाचार आरोपमा नासुविरुद्ध मुद्दा दायर